Horudhac: Chelsea vs Crystal Palace… (Blues oo si ku meel gaar ah u geli karta kaalinta labaad ee Premier League) – Gool FM
(London) 09 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa si ku meel gaar ah u degi karta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, marka ay garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhoweynayaan kooxda ay deriska ku yihiin London ee Crystal Palace galabta oo Sabti ah.
Hadda waxa u ku jiraan kaalinta Afaraad, wiilasha macallin Frank Lampard ayaana ka sare mari kara Manchester City iyo Leicester City haddii ay adkaadaan maanta, waxaana ay si ku meel gaar ah u geli doonaan kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Crystal Palace ayaa ku jirta kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta horyaalka, laakiin waxa ay rikoor fiican ka haysataa kulamada bannaanka marka loo eego sanadkan 2019, iyagoo badiyay siddeed jeer, halka ay barbaro galeen labo ka mid ah 14-kii kulan ee Premier League oo ay ka maqnaayeen garoonkooda Selhurst Park.
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea N’Golo Kante oo ahaa bedel aan la isticmaalin bartamihii Isbuuca ayaa taam ah, waxaana laga yaabaa inuu safto maanta oo Sabti ah kulankiisii ugu horreeyay muddo bil ah.
Ross Barkley ayaa laga yaabaa inuu ka soo laabto dhaawac canqawga ah oo uu la maqnaa, laakiin Mason Mount ayaa isna shaki uu ku jiraa inuu taam yahay maadaama uu dhaawac sheeganayo, Jorginho ayaana ganaax ku maqnaanaya kulankan kaddib markii uu uruursaday shan kaar oo kuwa digniinta ah.
Crystal Palace ayaa qarka u saaran inay soo dhoweyso Andros Townsend, kaasoo dhaawac muruqa ah uu soo gaaray kulankii ay barbaraha la geleen Kooxda Arsenal.
Gary Cahill iyo Cheikhou Kouyate ayaa ku jira loollan dhaawac kaddib markii ay madaxda dhaawacyo ka soo gaareen.
>- Chelsea ayaa guuleystay lix ka mid ah siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Crystal Palace kulammada horyaalka, waxaana labada kale ay guuldarro la kulmeen bishii August 2015 iyo bishii April 2017.
>- Tan iyo markii ay dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2013-14, Crystal Palace ayaa guuleystay afar kulan 12-keedii kulan ee ay horyaalka ku wajahday Chelsea, waana laban-laab inta jeer ee ay garaacday Blues 22-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay wajahday intii u dhaxeysay 1969 illaa 2005 (2 Guul, 9 Barbaro iyo 11 Guuldarro).
>- Chelsea ayaa guuleystay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee London Derby, markoodii ugu fiicnaana waxa ay guuleystay shan kulan oo xiriir ah intii u dhaxaysay October iyo December sanadkii 2014-kii, markaasoo uu kooxda macallin u ahaa Jose Mourinho.
>- Tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii hore, kaliya Liverpool (18), Manchester City (18) iyo Chelsea (14) ayaa guulo badan oo Premier League ah bannaanka ku soo helay iyagoo marti ah marka loo eego Crystal Palace 11 kulan horyaalka ku soo adkaatay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Crystal Palace ayaa guuleysatay labo ka mid ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaartay kulammada London Derby horyaalka Premier League, labada kulan ee kalena waxa ay soo heshay 1 guul iyo 1 barbaro, waana in ka badan intii ay horay u soo heleen 15-kii kulan ee hore oo ay soo heleen 2 guul, 3 barbaro iyo 10 guuldarro), kani waxa uu noqon doonaa kulankoodii 100-aad London derby ee horyaalka Premier League.
>- Chelsea ayaa raadineysa inay badiso lix kulan oo isku xiga horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii May sanadkii 2017-kii markaasoo uu macallin u ahaa Antonio Conte, xilli ciyaareedkoodii ugu dambeeyay ee hanashada horyaalka.
>- Xiddiga kooxda Chelsea ee Christian Pulisic ayaa shabaqa soo taabtay mid kasta oo ka mid ah labadii kulan ee ugu dambeeyay Premier League – kaliya saddex ciyaaryahan oo Mareykan ah ayaa gool dhaliyay saddex kulan oo isku xiga waana Clint Dempsey oo min seddex jeer oo isku xiga goolal dhaliyey sanadihii 2007, 2009 iyo 2012), Joe Max-Moore oo saddex xiriir ah goolal dhaliyey sanadkii 2000 iyo Roy Wegerle (1993).
>- Macallinka Kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa noqon kara macallinkii todobaad ee Ingiriis ah oo guuleysta lix kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League iyo midkii ugu horreeyey oo sidaas sameeya tan iyo Alan Pardew oo lix kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League guul la gaaray Newcastle United bishii April sanadkii 2012-kii.
Waa kee xiddigii ugu wanaagsanaa ee abid uu garoon la galay Zlatan Ibrahimovic?…(Messi, Fellaini, Iniesta, De Gea, Mise Xidig kale)